धादिङबाट काठमाडौं आउँदै गरेको कारलाई टिपरको ठक्कर: एकजनाको मृत्यु – Sapana Sanjal
धादिङबाट काठमाडौं आउँदै गरेको कारलाई टिपरको ठक्कर: एकजनाको मृत्यु
June 13, 2021 177
Sapana Sanjal : धादिङ । धादिङको गजुरीमा बिहीबार काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा४च २७९ नम्बरको मारुती अटो कारलाई काठमाडौंबाट गजुरीतर्फ जाँदै गरेको बा३ख ७३९३ नम्बरको टिपरले ठक्कर दियो । ठक्कर पछि ३३ वर्षीय चालक प्रकाश अधिकारीको घटनास्थलमै ज्यान गयो ।
आफन्तका अनुसार टिपरले गलत लेन दायाँतर्फ ओभरटेक गरेर कारलाई ठक्कर दिएको थियो । तर घटनापछि मुचुल्का गर्न पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले कारकै गल्ती देखाएर मुचुल्का बनाएपछि आफन्तले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
टिपरको ठक्करले चालक बस्ने सिट र ढोकातर्फको पुरै भाग छियाछिया भएको छ । मृतकका दाइ किशोर अधिकारीका अनुसार टिपरचालक, टिपरधनी र यातायात व्यवसायी धादिङकै भएकाले प्रहरीसँगै मिलेमतो गरी मुचुल्का बनाएका छन् ।
जसले पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति तथा न्याय पाउन सकेका छैनन् । ‘म पनि गाडी चलाउँछु तर प्रहरीले गलत मुचुल्का बनाएको छ,’ उनले भने, ‘घटनास्थल हामीले पनि अवलोकन गरेका छौं, प्रहरीले गलत मुचुल्का उठाएको छ ।’
उनका अनुसार मृतक कार चालकका २ जना नाबालक छोरा छन् । अभिभावक नै गुमिसकेकाले उनीहरूलाई हुर्काउन तथा पढाउन आर्थिक समस्या देखिने भएपछि पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।
उनीहरूले ३० लाख रुपैयाँ दिन आग्रह गरेका छन् । तर यसबारे टिपरचालक, प्रहरी, टिपर धनीले बेवास्ता गरेको मृतकका दाइ अधिकारीले बताए ।
Prevपाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, जेष्ठ ३० गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextअबको एक साता नेपालको आकाशमा घाम नलाग्ने
कोरोनावाट जोगीने भन्दै यस्तो उट्पट्याङ हर्कत गर्नेलाई चिकित्सकले दिए यस्तो चेतावनी (भिडियो हेर्नुस्)
संक्रमण भएकी युवतीको प्राइभेट पार्ट हेर्न खोजेपछि….
बिदेश मा हुनेको लागि खुसिको खबर ह्यतै बड्यो बिदेशी मुद्रा को भाउ यस्तो छ आजको भाउ !
अब पादबाट पनि फैलिन सक्छ कोरोना
पारस शाहले भने, ‘हेलमेट लगाउनु नलगाउनु मेरो मनको इच्छा हो’ (1364)
गाउँपालिकामा अनुदान खान यस्तो समेत हुँदोरहेछ ! किसान देबीप्रसादले दिउँसै पारे रात (1359)
चर्चित नायिका प्रियंका कार्की सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका बेला के भयो फेरी आयुष्मानलाई? (1278)
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला।। (951)
रामराम के भयो यी साना बाबुलाई ,हेर्दाहेर्दै यस्तो भयो ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (916)
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (893)
गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित (873)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (834)
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : नपढे तपाईँ लाई पछुतो हुनेछ ! (774)